ရွိုင်ကိန်းကိုယ်တိုင်ပါ လက်လန်သွားရတဲ့ ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေရဲ့ ဒါဘီခြေစွမ်း | Duwun
ပထမပိုင်းအပြီး ဆွေးနွေးခန်းမှာတင် ရွိုင်ကိန်းက ယူနိုက်တက်ကစားပုံကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ခဲ့တာပါ။
ယူနိုက်တက် အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီး ရွိုင်ကိန်းက မန်ချက်စတာဒါဘီမှာ အသင်းရဲ့ ပထမပိုင်းကစားပုံအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ပြစ်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ယူနိုက်တက်တို့ အိမ်ရှင်ဖြစ်ပေမယ့် ပထမပိုင်းမှာတင် မြို့ခံပြိုင်ဘက်ကို အခွင့်အရေးအကြိမ်ကြိမ်ပေးခဲ့ပြီး (၂) ဂိုးပြတ်နဲ့ ရှုံးနေခဲ့တာပါ။
ပွဲကစားချိန် (၆) မိနစ်မှာတင် မန်စီးတီးအတွက် ယူနိုက်တက်နောက်ခံလူ အဲရစ်ဘာယီက ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပထမပိုင်းပြီးခါနီးမှာ လုခ်ရှောရဲ့အမှားကတစ်ဆင့်ပဲ ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗားက သွင်းယူခဲ့တာပါ။ မန်စီးတီးအနေနဲ့ ပထမပိုင်းမှာ ယူနိုက်တက်ဂိုးပေါက်ကို အကြိမ်ကြိမ် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပြီး ဒီဂီယာသာ လက်စွမ်းမပြခဲ့ရင် အခုထက် ဂိုးပိုပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ယူနိုက်တက်ရဲ့ ခံစစ်ကစားပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရွိုင်ကိန်းက “ဒီလူတွေက နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အဆင့်တဲ့လား? သူတို့ ခံစစ်ကို ဘယ်လိုကစားနေတာလဲ? ကျွန်တော် နားကိုမလည်နိုင်တော့ဘူးဗျာ၊ အရှုံးပေးပါတယ်။ ယူနိုက်တက်က ဒီပွဲမှာ အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါ သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်မှပဲ ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်”
“တစ်ရာသီလုံး သူတို့ ဒီအတိုင်းပဲ။ အခွင့်အရေးတွေကို အမြဲတမ်းလွှင့်ပစ်နေကျပဲ။ မန်စီးတီးက တစ်ဂိုး၊ နှစ်ဂိုးလောက်နဲ့ ကျေနပ်မယ်မထင်ဘူး။ လောလောဆယ် နှစ်ဂိုးရှိပြီ။ ယူနိုက်တက်သာ အချိုးမပြေရင် နောက်ထပ် လေးငါးဂိုးလောက် ထပ်သွင်းသွားပါလိမ့်မယ်” လို့ ပထမပိုင်းအပြီးမှာတင် ပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။
ယူနိုက်တက်ဟာ ပထမပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် လှောင်ပြောင်ခံခဲ့ရပြီး ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ မန်စီးတီးဘက်က သိသိသာသာ ကစားအားချလိုက်တာကြောင့် သွင်းဂိုးတွေ ထပ်မံမမြင်တွေ့ရတော့ဘဲ မန်စီးတီးက (၂) ဂိုးပြတ်နဲ့သာ အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဟာ မန်စီးတီးနဲ့မတိုင်ခင် အိုးထရက်ဖို့ဒ်မှာ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တုန်းကလည်း လီဗာပူးကို (၅) ဂိုးပြတ်နဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့တာပါ။ ယူနိုက်တက်ဟာ လီဗာပူးနဲ့ပွဲအပြီးမှာ နည်းပြဆိုးလ်ရှားကို စပါး၊ အတ္တလန်တာ၊ အခု မန်စီးတီးတို့နဲ့ပွဲတွေအတွက် အခွင့်အရေးထပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ စပါးကိုအနိုင်၊ အတ္တလန်တာကိုသရေ၊ အခု မန်စီးတီးကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် ဆိုးလ်ရှားရဲ့အနာဂတ် ဘာတွေထပ်ဖြစ်မလဲ၊ စျေးကွက်ထဲမှာ လွယ်လင့်တကူရနိုင်တဲ့ နည်းပြ ရနိုင်ခြေ နည်းပါးနေချိန်မှာ ဆိုးလ်ရှား ယူနိုက်တက်မှာပဲ ဆက်ရှိမလား စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါ။